नेपालगञ्जमा होली मनाउँने विविध शैली
करुणा शाह. २०७५ चैत्र ५ गते 7.01K
आयो होली आयो इन्द्रेणीको सातै रङ ल्यायो रे होली ...। आउ सबै मिलेर खेलौं होली के के हुन्छ थाहा छैन भोली ...। होलीमा मेरो दिल बस्यो कान्छी कि बुट्टे चोलीमा ...रातो रातो पहेलो निलो सेतो हरियो ...रङ बर्षे भिगे चुनरवाली ....बल्म पिचकारी जो तुने मारी जस्ता गित केही दिन अगाडी एफ एम ..टिभीमा बज्न थाल्छ अनि सबैलाई होली एकदम नजिक आएको आभाष हुन्छ । साथै आफन्त साथीहरूको ह्याप्पी होली भनेर एसएमएस आउँदा होलीको रौनक अझ बढि हुन्छ । रंगीचंगी रङ अबिर हेर्दै उज्यालो र चहकिलोको पर्व हो होली इस्टमित्र साथिभाइसँग होली खेन्नुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । भित्रबाटैं उमङ्ग अनुहारमा मुस्कान रंगीचंगी अबिरले होली खेल्नु सबैलाई हर्सोल्लाषको कुरा हो । बर्षमा एकपटक खेलिने कलरफुल पर्वले सबैलाई रमाइलो पार्छ । होली रमाइलो गर्नु लामो समय सम्म भेट नभएको साथीहरू आफन्तहरुसँग भेट गराउने पर्व पनि हो । साथै मनमुटाव भएका साथीभाइसँग पुनमिलन गराउने चाड पनि हो होली ।
हरेक पर्वको आफ्नै विशेषता हुन्छ होलीको पनि आफ्नै विशेषता छ । असत्य माथी सत्यको बिजयको सम्झनामा होली खेलिन्छ । साथै हिरण्य कश्यपका छोरा प्रल्हादलाई होलिकाले आगोमा दहन गर्दा् होलिका आफै जलेको पौराणिक कथा छ । जे जस्तो होस होली रमाइलो र उमंग सङ्ग मनाउनु पर्छ । रमाइलो र खुशीको साथमा मनाइने होलीमा आजभोली निकै बिकृति पनि भित्र्रेको देखिन्छ । होलीमा छत बाट लोला हान्नु, नचिनेको लाई जबर्जस्त कलर लगाइ दिनु ,अबिर कि सातो कलर ग्रिस लगाएर होली खेल्नु,महिला सँग होली खेल्दा संबेदनशिल अङ्गमा लक्षित गरेर लोला वा कलर लाउनु , रमाइलोको बाहानामा मदिरा सेवन गर्नु ,भाङ खाएर लठ्ठ पर्नु यी सबै होलीमा भित्रिएका बिकृती हुन । बिकृती र नराम्रो पक्षलाई त्यागी रमाइलो र सभ्य तरिकाले होली खेल्नु आफैमा ठुलो कुरा हो । सबैको होली खेल्ने आ–आफनै तरिका हुन्छ । सोही अनुसार हामीले यसपालीको होली तपाई कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर विभिन्न क्षेत्रका महानुभावहरुसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ कुराकानीको अंश ।
ठकुरी सहयोग सञ्जाल प्रदेश नम्बर ५ प्रमुख
होली सद्भावको पर्व हो ! यस पालीको होली अघिल्लो बर्षका होली भन्दा अलिक फरक ढंगले मनाउदै छु ! पहिला पहिला साथीभाई र परिवारमा सिमित हुन्थ्यो भने अहिले यस पाली “ठकुरी सहयोग संजाल बाँके“ ले आयोजना गर्न लागेको होली मिलन कार्यक्रममा सहभागी भई ठकुरी समुदायका मान्यवरहरुसंग होली खेल्ने कार्यक्रम छ ! बाल्यकाल मेरो बर्दियाको थारू गाऊमा बितेको हुदा यसको आफ्नै बिशेष महत्व र सम्झना छ । मेरो पुरै स्कुले बिद्यार्थी जिवन होस्टलमै बिते पनि हरेक सानो ठुलो पर्वमा घर जाने गरेको थिए । यो होली पर्व थारू समुदायहरूले तिन दिन मनाउने गर्छन । पहिलो दिन पानीको मात्र, अर्को दिन हिलोका,े अन्तिम दिन रंग गुलालले, तपाई आफै अनुमान लगाउन सक्नु हुन्छ एउटा होस्टेल बस्ने बिद्यार्थीलाई केही दिनको स्वतन्त्रता र त्यो बेलाको गाँऊ घरमा हुने ठट्टा रमाइलो माहोलको कति मस्ति गरिएको होला भनेर !
महिला उद्यमी बिकास समिति केन्द्रीय सदस्य
यसपालीको होली परिवार साथीहरू सँग मनाउदै छु । साथै होलीको कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा जाने पक्षमा छु । आफु सधैं ब्यस्त र श्रीमान पनि ब्यस्त हुनाले यसपाली होली स्पेशल उहाँसँग घुमेर मनाउदैछु । मलाई होली स्पेशल रङले होली खेल्दा आफ्नो अनुहार हेर्दा आफै रमाइलो लाग्छ । सानोमा हामी आफन्त कहाँ गएर होली खेल्थौं लोला पिचकारी हानेको सम्झना आउँछ । पहिला र अहिलेको होलीमा धेरै फरक छ । अहिले बजारको चोक चोकमा गीत संगीत लगाएर मज्जाले नाचिन्छ । यो पनि समय सँगैको रमाइलो हो । म नेपालगन्जमा जन्मेको हुनाले तराईको होलि एकदम मन पर्छ ।
केन्द्रीय पार्षद,नेपाल पत्रकार महासंघ
होली असत्यमाथी सत्यको पर्वको रुपमा मैले बुझेको छु । होली सद्भावको पर्व पनि हो । पछिल्लो समय होलीले नेपालगञ्जलाई सद्भावको पर्व र सद्भावको शहरको रुपमा चिनाउन मद्धत गरिरहेको मेरो आप्mनो बुझाई छ । यसपालीको होली हामी आफ्नो समुह सँग ( राजनीतिकर्मी,ब्यापारी समाजसेवी पत्रकार) मिलेर सामुहिक रुपमा मनाउँदैछौं । स्पेशल आफुले खेल्नु भन्दा अरुले सबै प्रकारको अवीरले रमाउदै होली खेलेको हेर्न निकै मन पर्छ । म सल्यानमा जन्मेको हुँदा, त्यसबेला हामीहरु होली आउनु भन्दा १०÷१५ दिन पहिले नै होली खेल्थ्यौं । हाम्रो गाउँमा बास नपाउने हुँदा टाढा जंगलमा पुगेर चोरेर ल्याउथ्यौं । अनी बासको पिचकारी बनाएर होली खेल्थ्यौं । यसैगरी यहाँ आईसकेपछि हिलोको होली खेलेको नालीमा पल्टेको पल्टाएको अहिले पनि ताजा स्मरण हुन्छ ।
प्रहरी निरीक्षक प्रमुख जिल्ला ट्राफिक
प्रहरी कार्यालय बाँके ।
देश तथा विदेशमा बस्ने सबै नेपाली दाजु भाइ दिदी बैनीलाई हेप्पी होली भन्न चाहन्छु । मेरो यसपाली मम्मि बितेको हुनाले होली छैन् । २४ सै घण्टा खटिने जागीर छ । डिउटी गरेर कर्मचारी सँग खान पिन गरेर सामान्य होली खेल्ने छौं । मलाई होली एकदमै मन पर्ने पर्व हो । आपसी सद्भाव भाइचारा होलीले कायम गर्छ । बाल्यकालमा टोल टोलमा गएर होली खेल्ने,हिलोले खेलेको सम्झेर आजभोली हाँसो लाग्छ । होलीको नाममा जबर्जस्ती गरेर अरुको इच्छा बिपरित होली खेलेको मन पर्दैन । मेरो घर बझाङमा साथीहरूसँग लोला अबिर मिसाएर होली खेल्थ्यौं । अझ अर्को कुरा त होली खेलेको रङ २/३ दिन सम्म नछुट्दा सारै रमाइलो लाग्थ्यो ।
मिस नेपालगन्ज ( २०१५)
सबैलाई सबैभन्दा पहिला ह्याप्पी होली । यस पाली मेरो मामा घरको हजुरबुबा बित्नु भएकोले होली मनाउदैनौ । हामी नातिनीले मनाउन मिल्ने भएपनि यसपाली हामी होली खेल्नेछैनौं । परिवार सथिभाइसँग खानपिन हुन्छ । होली मलाई साथीभाई, आफन्तसँग रमाइलो गरेर मनाउने सबै प्रकारको रङ्ग मिक्स गरेर खुशि हुँदै रङ खेल्ने स्पेशल लाग्छ । सानोमा साथीहरूसँग मट्का फुटाएको, बेलुन हान्ने, अन्डा फोड्ने,बाटो छेक्ने पैसा माग्ने,बाल्टिमारँग मिसाएको पानी भरेर मान्छेलाई हाल्ने गरेको याद अहिले नि ताजै छ ।
राप्रपा कोहलपुर नगर अध्यक्ष
सबैमा ह्याप्पी होली । यसपाली म दाङ जादैं छु । पुराना साथीहरू आफन्तहरुसँग होली मनाउने हो । मलाई होली भनेपछी स्पेशल झै–झगडा मनमुटाव भएका साथीहरूसँग पुनः रंगीचंगी कलर सहितको होली खेलेर पुरानो दुश्मनी हटाएर नयाँ सम्बन्ध कायम गर्ने हो लाग्छ । सानोमा दाङ हुँदा भाइ बैनी परिवारसँग रमाउने बेलुन हान्ने गर्थे । म दिज्जुबैनीको लागि सधैं एकदम प्यारो छु । होलीमा २०÷२२ जना दिज्जु बैनी सबैले सँगै होली खेल्दा लाग्थ्योे टयापे मुन्द्रे जवर्जस्ती गर्र्छन भनेर एक पटक होली खेल्न जादा मेरो दिज्जु बैनीलाई ह्याप्पी होली भन्दै केटाहरु जबरजस्ति अबिर लगाउन आए । मैले सम्झाएपनि
मानेनन । त्यसपछि मैले ८।१० जनालाई मज्जाले पिटे र प्रहरी बोलाएर सरी भन्न लगाएको सधै
स्मरण हुन्छ ।
(बिद्यार्थी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर बिटिएस )
फस्ट ह्याप्पी होली अल माइ फेमिली एण्ड फ्रेन्ड । यसपालीको होली साथीहरूसँग मनाउदै छु । घर धादिङ भएकोले साथिभाइ परिवार मिस गर्दै छु । हाम्रो पहाडमा एक दिन मात्रै होली हुन्छ । नेपालगन्जमा २ दिन होली हुन्छ । निकै रमाइलो लाग्छ । मलाई यहाँ होली पोहर पनि नेपालगन्जमै मज्जाले रमाइलो गरि होली खेलिएको हो । यसपाली पनि रमाइलो हुनेछ । बाल्यकालमा बाइक भएका मनिसहरु बाइक सरर गरेर होली खेलेको हेर्दा निकै रहर लाग्थ्यो । अब ठुलो भइयो खासै रहर लाग्दैन । मलाई सबै भन्दा मनपर्ने कलर निलो हो निलोले अनुहारमा बेग्लै चमक हुन्छ । होली साथीहरूले आफन्तसँग भेटघाट, खानपिन विशेष लाग्छ । नेपालगन्जको होली चोक चोकमा डिजेमा नाँच्ने, मटका फुटाउने र अन्त्यमा कपडा च्यातेर पनि खेलेको एकदम मन पर्छ ।
प्रभा शाह । गृहणी
होलीको सबैलाई सुभकामना । मलाई होली एक दमै मनपर्ने चाड हो । सप्तरङी रङहरुले होली खेल्दा सबै दुःख पिडा बिर्षेर मुहारमा बेग्लै चमक हुन्छ । मेरो परिवार निकै ठलो छ । कोहलपुर, नेपालगन्ज, दाङमा । नेपालागन्ज र कोहलपुरका आफन्त साथिभाइ सबैलाई घरमै बोलाएर सबै प्रकारका खाने कुरा सबैले मिलेर बनाउँछौं । त्यसपछि सबैले होलीको गित बजाएर रमाइलो गर्दै मज्जाले नाँच्छौं । होलीमा मेरो घरमा स्पेशल चिकेन बिरयानी,मिक्स अचार,खसीको मासु कि ग्राभी, भेजलाई पनिर र राज्मा हुन्छ । मेरा जिमका साथी र ब्यापारी साथै सबै लाई बोलाएर छतमा सानो टेन्ट राखेर एक दम रमाइलो हुन्छ । सानोमा पनि मेरो ग्रुपमा म लिडर भएर होली खेलेको सम्झना ताजै छ ।
भष्टाचार विरुद्धका सामाजिक अभियन्ता
सामाजिक सद्भावको पर्व होलीले सबैलाई एकताको शुत्रमा बाँध्ने गरेको छ । यसले सामाजिक एकता, सहभाव र सहिष्णुता अभिबृद्धि गर्दै आएको छ । हरेक बर्ष झै यस बर्ष पनि होली हाम्रो माझ आईसकेको छ ।सामाजिक सद्भाव समिती नेपालगन्जले आयोजना गर्न लागेको होली मिलन कार्यक्रम र बासले आयोजना गर्ने होली जमघट कार्यक्रममा ब्यस्त हुनेछु । यी दुबै कार्यक्रम बिकृती रहित होली मिलन हुनेछन् । जहाँ एक आपसमा होली खेलेर आत्मियता प्रकट गरिनेछ ।म कहिले पनि होलीमा नचिनेको मान्छेलाई कलर लगाउदैन । यसपटक पनि होलीका नाममा नचिनेको मान्छेलाइ कलर लगाउने, छर्किने, लोला हान्ने काम म बाट हुनेछैन र त्यस्तो गलत कार्यका विरुद्धमा सन्देश प्रवाह गरिनेछ । होलीलाई बिकृती मुक्त सदभाव युक्त पर्व मनाउन सबैलाई आग्रह गर्दै मनाउने योजना छ । ईच्छुक साथीहरुसङ्ग होली खेल्ने र शुभकामना आदान प्रदान गरिनेछ ।